सन् २०१३ मा बढी पढिएका १३ ब्लग – MySansar
एउटा अर्को वर्ष आजदेखि हामीबाट विदा हुँदैछ। माइसंसारको यो आठौँ वर्ष थियो। यो वर्ष धेरै राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा निकै उतारचढाव आए। अनि त्यसैमा केन्द्रित भयो माइसंसारका ब्लग। सन् २०१३ मा सबैभन्दा बढी पढिएका १३ ब्लगहरुको सूची यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु।
यो वर्ष संविधान सभाको निर्वाचन भएका कारण सबैभन्दा बढी त्यसै निर्वाचनको लाइभ अपडेट पेज खोलियो। त्यसबाहेक धेरै पढिएका अरु १३ ब्लग यस्ता छन्-
१ बलात्कारको आरोप लगाउने युवतीलाई कुट्दै मोसो दलियो
By Salokya, on July 23rd, 2013
सन् २०१३ को यो सबैभन्दा बढी पढिएको ब्लग रह्यो। ३८ हजारभन्दा बढीले पढेको यो ब्लगले राष्ट्रकै ध्यानाकर्षण गरेको थियो। यही ब्लग पढेपछि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए। मुख्य सचिवले यसै विषयमा माइसंसारमा कमेन्ट पनि लेखेका थिए। मूलधारका कुनै पनि सञ्चार माध्यमले नदिएको यो समाचार ब्लगमा छापिएको पर्सिपल्ट सबैले छापेका थिए।
एक २३ वर्षीया दलित युवती सफाइ दिँदैछिन्। चारैतिर आफूलाई सभ्य भन्न रुचाउने तर व्यवहार हेर्दा पशुजस्ता समाजका सदस्यहरु छन्। आक्रोशमा छन्, केरकार गर्दैछन्। युवतीको कोही छैन। श्रीमान् पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर रहेछन्। आफूलाई स्थानीय एक युवकले जबर्जस्ती गर्न खोजेको उजुरी प्रहरी चौकीमा दिएकी रहिछिन् उनले। त्यो झुटो भन्ने दावी त्यो जंगली भिडको रहेछ। त्यही भिड जम्मा भएको ठाउँ ‘न्यायालय’ थियो। ‘वकिल’ केटाहरुले केरकार गरे। त्यही भिडले उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो। अनि त्यही अमानवीय भिडबाट एक महिलाले कपाल लुछ्दै, लुगा च्यात्दै भक्कुमारसँग कुटिन् उनलाई। अरु महिलाले जथाभावी अपशब्दका साथ गाली गरे। कसैले उचाल्यो- यसलाई त कालो मोसो दल्नुपर्छ। थप पढ्न क्लिक गर्नुस्
२ बाबुराम भट्टराईबारे गजबको पुस्तक
By विन्देश दाहाल, on April 18th, 2013
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको बायोग्राफी पुस्तकका अंश समेट्दै लेखिएको यो ब्लग वर्षको दोस्रो पढिएको ब्लग बन्यो। साढे ३७ हजारभन्दा बढी पटक यो ब्लग पढिएको थियो भने सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सेयर भएको थियो।
विद्वान् जीवनीलेखकका लेखनका केही नमुना हेरौं है त ! मैले किताबबाट जस्ताको तस्तै सारेको छु। थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
३ गिज्याउने हो? ल गिज्याउनुस् तर वास्तविकता पनि बुझ्नुस्
By Salokya, on October 2nd, 2013
३५ हजारभन्दा बढी पटक पढिएको यो ब्लग अमेरिकाको फक्स न्युजले अपाङ्ग अधिकारकर्मी सुदर्शन सुवेदीलाई उडाएर प्रस्तुत गरेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा उनीविरुद्ध भइरहेको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रियाका बीच विपरीत धारमा लेखिएको थियो।
अमेरिकाको फ्याउरे खबर (Fox News) को जसलाई पनि उडाउने कार्यक्रममा एक जना नेपाली पनि परेछन्। Fox News का Jesse Watters ले पाए तपाईँलाई पनि उडाउँथे। हामी चैँ के विधि सिरियस भा’का। सरकारदेखि लिएर सरकारी कर्मचारीसम्मलाई गाली गर्दैछौँ। सुदर्शन सुवेदी कुनै सरकारी कर्मचारी थिएनन्, डिप्लोम्याट थिएनन्। सरकारी पैसामा घुम्न गएका पनि थिएनन्। उनी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ का अध्यक्ष हुन्। UN को महासभामा NGO को प्रतिनिधिका रुपमा UN Guest भएर गएका हुन्। UN मा अङ्ग्रेजी जान्ने नजान्ने हेरेर पाहुना बोलाइँदैन, उसले सम्बन्धित क्षेत्रमा गरेको कामको मूल्याङ्कन गरेर बोलाइन्छ। पर्वतको विपन्न परिवारमा जन्मिएर पोलियोपीडित भई दाहिने पाटो बेकारजस्तै छ उनको। सानोमा उनलाई कक्षाका सहपाठीहरुले अपाङ्ग भनेर गिज्याउँथे, आज तपाईँहरु अङ्ग्रेजी जानेन भनेर खुब गिज्याइरहनुभएको छ। तर तपाईँ जस्तो अरुलाई होच्याएरमात्र बसेनन् उनी। अघि बढे अपाङ्ग हकहितका लागि। अशोका फेलो बने सन् २००४ मा। अपाङ्ग भएकामा गर्व छ उनलाई। अपाङ्कका मुक्तिदाता हुन् उनी। थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
माथिका शीर्ष ३ बाहेक यो वर्ष हनुमानढोकाको ढुकुटी, धमला दम्पतीको अन्तर्वार्ता, खाद्य पदार्थमा मिसावट, अपराध, पूर्व राजपरिवार र खेलको ब्लग बढी पढियो। त्यसैगरी प्रवासमा बेल्जियम, कतार र अस्ट्रेलियाका ब्लग बढी पढिए। बढी पढिएका अरु १० ब्लग यस्ता छन्-
४ के भेटियो सय वर्ष पुरानो ढुकुटी खोल्दा ?
हनुमानढोका दरबारक्षेत्रमा रहेको भण्डारखालको एउटा पुरानो ढुकुटी हिजो सय वर्षपछि खोलेर हेरिएको छ। बाबुराम सरकारले एक महिनाअघि ढुकुटी फोर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। चन्द्रशमशेरको पालामा विक्रम संवत् १९७० मा यो ढुकुटी बनाएको अनुमान गरिएको छ। ढुकुटीमा के के भेटियो त ? थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
५ कुन क्षेत्रमा को-को उम्मेदवार ? (विगतको नतिजासहित)
६ धमला पत्‍नीसहित टिभीमा देखिँदा..
दुर्गाप्रसाद धमलालाई खासै कसैले चिन्दैनन्। तर उनैको अर्को नाम ऋषि धमलालाई भने नचिन्ने को होला र ! कतिलाई त उनको अनुहार टिभीमा देखिँदा रिसै उठ्ने भयो भन्छन्। उनै धमला भर्खरै बिहे गरेपछि पत्‍नीसहित टिभीमा देखा पर्न थालेका छन्। हिमालय टिभीमा अस्ति भर्खरै श्रीमान् श्रीमतीको अन्तर्वार्ता लिने कार्यक्रम जीवन साथीमा धमला जोडीको अन्तर्वार्ता प्रसारण भएको थियो। आजभोलि यता लोडसेडिङ हुने कारणले कतिले त्यो हेर्न पाउनु भएन होला। खासै तुक नभए पनि हसाँउने गरी रमाइलो भएकोले तपाईँहरुलाई पनि यो अन्तर्वार्ता सेयर गर्न मन लाग्यो। मंसिरमा बिहे गर्ने भनेका धमलाले वैशाखमा बल्ल बिहे गर्न पाए। किन भन्ने प्रश्नमा उनले लम्बेचौडे व्याख्यान लगाए। तर उनकी पत्‍नी एलिजा गौतमले भने सजिलै धमलाको काका बितेकोले ढिला भएको भन्ने जवाफ दिइन्। थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
७ अर्कालाई डिपोर्ट गराउन खोज्दा आफै पदच्युत
गार्डियनको अनुसन्धानमूलक सामाग्रीमा नेपाली कामदारले कतारमा पाइरहेको दुःख सार्वजनिक भएकै समयमा त्यहाँका नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्मालाई फिर्ता बोलाउने सरकारले निर्णय गर्‍यो। गार्डियनको त्यो समाचारसँगै यसलाई पनि जोडेर पश्चिमा मिडियाले प्रचार गरे। त्यही प्रचारको पछि लागेकाहरु मायाकुमारी शर्माले कतारलाई खुला जेल भनेर ठीकै त भनेका थिए नि भन्दै उनको प्रशंसा गरिरहेका भेटिए। के सन्दर्भमा शर्माले त्यसो भनेकी थिइन्, त्यहाँ हुँदा केसम्म गरेकी थिइन् भन्ने थाहै थिएन उनीहरुलाई। मजदूरको पक्षमा माइसंसारमै ब्लग लेख्नेलाई उनले डिपोर्ट गराउन खोजेकी थिइन्। ब्लगमा लेखिएका शब्दलाई अर्कै व्याख्या गर्दै उनले राजदूतको पावर देखाएर आफ्नै नागरिकलाई डिपोर्ट गराउन कतार सरकारलाई पत्र लेखेकी थिइन्। थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
८. सचिवलाई देखाइयो यस्ता फोटो
यो पहेँलो चिज के होला ? के अनुमान लगाउनु भयो कुन्नि, यो भुजिया फ्याक्ट्रीको दृश्य हो। थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
९ रातोपुलमा दिउँसै त्यस्तो हुँदा नि कसैलाई पत्तै छैन
माथिको फोटो गुगल अर्थबाट लिइएको हो। यसमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३३, रातोपुल क्षेत्र देखिन्छ। यो फोटोमा देखिन्छ त्यहाँ कति घनाबस्ती रहेको छ। सोमबार दिउँसो त्यहाँ एउटा ठूलै घटना भयो। के तपाईँले थाहा पाउनु भयो ? यत्रा विधि न्युज च्यानल, यत्रा विधि पत्रिका, यति धेरै एफएमहरु छन्। राजधानीको घना बस्तीमा भएको यो घटनाबारे मैले भोलिपल्ट राति अबेरमात्र थाहा पाएँ। खासमा के भएको थियो त ? थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
१० एक्लो छोरा जीवन-मृत्यु दोसाँधमा, बाबुआमाको कस्तो बेवास्ता कठै !
पूर्व युवराज पारस शाह अचेत अवस्थामा बैँककको अस्पतालको बेडमा लडेको तीन दिन भइसक्यो। उनी जीवन-मृत्युको दोसाँधमा छन्। अस्तिसम्म पारसको बारेमा नानाभाँती गालीले भरिने माइसंसारका कमेन्टहरुमा उनीप्रति सहानुभूति झल्किएका कमेन्टको बाहुल्य छ। तर एक्लो छोराले मृत्युसँग संघर्ष गर्दैगर्दा बाबु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र आमा पूर्व रानी कोमल भने सिमरामा छुट्टी मनाउँदैछन्। बरु दाजु भेट्न साख्खै एक्ली बहिनी र अरु बहिनी, बहिनीज्वाइँ उता पुगिसके, बाबुआमाको मन चाहिँ कस्तो मानेको होला त्यो आफन्त प्रभुशमशेर राणाको घरमा बसिरहन। एक महिनाका लागि भनेर पूर्व राजपरिवार सिमरा पुगेका थिए। अहिलेसम्म उनीहरु उतै छन्। थप पढ्न क्लिक गर्नुस्
११ बेल्जियमका नेपालीले आफ्नै कलाकारलाई बाल दिएनन्, तीन नेपाली कलाकारको हरिबिजोग !
केही दिन मात्रै अगाडिको कुरा। बेल्जियमको ब्रुज शहरमा हिन्दी चलचित्र पिकेको सुटिङ थियो। धेरै नेपालीहरु भारतीय कलाकार हेर्नका लागि तँछाड मछाड गर्दै पुगे। कति त आफनो काम थाति राखेर उनीहरुको एक झलक दर्शन गर्न दौडिए। थ्री इडियट्स जस्ता चर्चित फिल्म निर्देशन गरिसकेका निर्देशक राजकुमार हिरानीलाई हेर्नकै निम्ति घुँइचो लाग्यो। हिन्दी फिल्मका कलाकारहरुलाई हेर्न कै लागि तम्सिने नेपालीहरु आफ्नै देशका कलाकारहरु आउँदा के गर्लान् ? झन् उत्साहित भनेर सोच्नुभएको ? गलत ! नेपालबाट दार्चुला बाढीपीडितहरुको लागि च्यारिटी सो कार्यक्रम गर्ने भन्दै आएका कलाकारहरु गरिमा पन्त, नन्दिता केसी, रिमा गुरुङहरुलाई उनीहरुले बाल नदिएपछि हरिबिजोगको स्थिति देखियो। थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
१२ अस्ट्रेलियामा देखिएको नेपाली ‘वीरता’
वीरताको चिनो, वीरको सन्तान…लगायत नेपाली वीरताका गीतहरु थुप्रै छन्। शायद् यस्तै गीत सुनेर रगत उम्लिएका एक नेपाली विद्यार्थीले पराई भूमिमा उल्टो खालको वीरता देखाउँदा आफै संकटमा परेका छन्। माथि फोटोमा देखिएका ‘वीर’को नाम सञ्जय पन्त हो। गएको हप्ता उनले सिड्नीको पार्क भ्यु होटलमा देखाएको तान्डव हो यो। र, यसलाई होटलको सिसिटिभीले खिचेको हो। कम्ता उपद्रो मच्चाएका हैनन् उनले। माथिको फोटोमा उनले क्रिकेट ब्याटले होटलमा तोडफोड मच्चाउँदै गरेको देखिएको छ। थप पढ्न क्लिक गर्नुस्
१३ अफगानिस्तानद्वारा नेपालको सपना चकनाचुर, किरणको हातबाट बल फुस्कने, रोहितको दुई-दुई वटा पेनाल्टी नछिर्ने
रङ्गशालामा पञ्चबलि गर्दैमा र नाग छोप्दैमा सबै खेल जितिन्छ भन्ने सोच्नेलाई आजको खेलले लक मात्र हैन ब्याडलक पनि हुन्छ भनेर देखाइदिएको छ। खेलको १० मिनेटमै अनुभवी गोलकिपर किरण चेम्जोङले समातिसक्दासक्दै पनि फुत्केको बललाई गोल गरेर अफगानिस्तानले अग्रता लियो। तर गल्ती त्यही एउटा मात्र थिएन। खेल सकिन आँट्दा नसोचिएको पेनाल्टी रोहित चन्दले मिस गरे। नाटकीय घटना ! पहिलो पेनाल्टी हान्दा मिलेन भनेर फेरि पेनाल्टी हान्न दिइयो। तर दुर्भाग्य, त्यो पेनाल्टीमा पनि इन्डोनेसियाको लिगमा खेल्ने चन्दले गोल गर्न सकेनन्। अन्त्यमा खेल अफगानिस्तानले १-० ले जित्यो र नेपालको गृहभूमिमा उपाधि जित्ने सपना चकनाचुर भयो। थप पढ्न क्लिक गर्नुस्
6 thoughts on “सन् २०१३ मा बढी पढिएका १३ ब्लग”
चुनाब संम्पन्न भो / अब देश ले संबिधान पवोस / अनि दलहरु दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठी देश को हित मा लागुन / युवा विदेश पलायन हुने क्रम रोकीयोश अनि देशमै कामगरी खाने बाताबरण तयार होस् / नया बर्ष २०१४ को हार्दिक मगलमय शुभकामना /
सबै भन्दा बढी नमुना मायाकुमारी शर्मा लाग्यो। उनले लेखेको स्पष्टीकरण पत्रमा न त नेपाली शुद्द छ न अंग्रेजी। Deportation लाई depotation लेखेको छ। दु:खको कुरा, उनलाई अझै आफ्नो कमजोरी पत्तो छैन। काश कुटनीति पनि नेपालमा माओबादीको राजनीती जस्तो हुदो हो।
के कस्ता विषय वस्तुले सोसलमिडियामा सार्वाधिक स्थान पाउँछ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । यसका लागि धन्यवाद ।
So we had so many negetive news in past year. Hope in 2014 we will be able to see some good news that make us feel proud. Happy new year to all 🙂
२०१३ लाई बिदाई र २०१४ लाइ सुस्वागतम !
यो ऋषि भन्ने मनुवालाई कसले न्वारान गर्यो कुन्नि …यिनको कुनै पनि चीज यस नाम संग मेल खाँदो देखिएन .यिनको हाँसो अति कुटिल र रहस्यपूर्ण छ..यिनको प्रवृत्ति र अनुहार संग जंचने कुनै अर्को शब्द भएमा पुन:न्वारान गर्नु सामयिक कदम हुने देखिन्छ…आफुलाई त यो मान्छे लाइ सुहाउने नाम ‘शकुनि’ भनी सम्झन मन लाग्छ.
घटना ,दुर्घटना नचाहदा नचाहदै हुन्छन /कुनै कृत्रिम त कुनै प्राकृतिक / २०१४ मा यस्ता नराम्रा घटना हरु सुन्न नपरोस / नेताहरु को दिमागमा गोबरको सट्टा गिदी पसोस / २०१४ मा सबैको उन्नति को कामना गर्दछु /
र अन्तमा म सहपाठी मित्रहरुलाई २०१३को अन्तिम प्रस्न सोध्न चाहन्छु /, ऋषि धमला लै देखे पछि मलाई किन एक्लै हाँसो उठ्छ ?